​नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले ४४ प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले शेयरधनीहरुलाई ४४ प्रतिशत बोनस शेयर दिने भएको छ । गत असोज २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीलाई उक्त मात्रामा बोनस शेयर दिने प्रस्ताव..
फस्र्ट माइक्रो फाइनान्सको खुद नाफा १ करोड १० लाख, निष्कृय कर्जा अनुपात शुन्य प्रतिशत
काठमाडौं । फस्ट माईक्रोफाईनान्स डेभलपमेन्टले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ करोड १० लाख रुपैंया खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको फाइनान्स लगानीकर्ताको..
​निर्धन उत्थान बैंकले ६२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । निर्धन उत्थान बैंकले बोनश तथा नगदं गरी ६२ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीमध्ये यो सबैभन्दा उच्च हो । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक..
कम्युनिटी बैकको बोनस र हकप्रद सेयरबाटै चुक्ता पूँजी ५० करोड पुग्ने
काठमाडौं । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेण्ट बैकले आगामी २ बर्षभित्रमा बैंकको चुक्ता पूँजी ५० करोड र अधिकृत पूँजी ७० करोड र्पुयाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको..
एकै पटक ५ संस्था गाभिएर एनएमबि बैंकको एकिकृत कारोबार
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ३ वटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्सलाई गाभेर आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७२ असोज १२ गते पाएको मर्जर स्वीकृतिसँगै भृकुटी..
​कैलाश विकाश बैंकको २४ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडको साधारण सभाले लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गरेको २४ प्रतिसत बोनस सेयर पारित गरेको छ । बैंकको शनिबार पोखरामा सम्पन्न २२ औं वार्षिक साधारण सभाले लाभांश प्रस्ताव..
​रुरल माइक्रोले २६ प्रतिशत, विराटलक्ष्मीले २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । रुरल माइक्रो फाईनान्सल डेभलपमेन्ट सेन्टरले बोनश सेयर तथा नगदं गरी २६ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेका छ । यसैगरि विराटलक्ष्मी विकास बैंकले पनि २५ प्रतिशत बोनश सेयर वितरण..
​सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको दशैं र तिहारको अवसरमा बम्परमा कार उपहार योजना
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले दशैं र तिहारको अवसर पारेर बम्परमा कार उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । साउदी अरेबियास्थित टेलीमनीबाट लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमार्फत सिटी एक्सप्रेस मनी..
काठमाडौं । कामना बिकास वैंकको नवौं वार्षिक साधारणसभाले बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश पारित गरेको छ । बैंकले गतबर्षको मुनाफाबाट कुल चुक्ता पुंजीको १.१९ प्रतिशत नगद लाभांस (कर प्रयोजनको लागि) तथा..
सिटिजन्स बैंकको बोनस सेयर साधारणसभाबाट पारित, संचालक समितिको अध्यक्षमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत सेयर र १ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको पुँजी योजना..
आईएमई र ग्लोबल आइएमईले दिए १०० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
काठमाडौं । आईएमई मनिट्रान्सफर र ग्लोबल आइएमई बैंकले एकसय जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । बैंकले सुरु गरेको ग्लोबल आइएमई आकांक्षा छात्रवृत्ति योजना अनुसार कक्षा १ देखि ११ कक्षासम्म..
सानिमा बैंकको एघारौं वाषिर्क साधारणसभाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर पारित
काठमाडौं । सानिमा बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत नगद लाभांस दिने भएको छ । बैंकको बिहीबार सम्पन्न एघारौं वाषिर्क साधारणसभाले बोनस सेयर..
ओमको फाइनान्सको २७ प्रतिशत बोनश शेयर दिने प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौं । ओम फाईनान्स लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको २८.४९ प्रतिशत लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकृत गरेका छ । फाईनान्सको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको २७.०७ प्रतिशत बोनश सेयर र १.४२ प्रतिशत नगद..
अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले दिने भयो १० प्रतिशत बोनस सेयर
काठमाडौं । अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई दश प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको गत सोमबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले गतबर्षको मुनाफाबाट उक्त लाभांश दिने प्रस्ताव..
​त्रिवेणी विकास बैंकले पनि १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । त्रिवेणी विकास बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई दश प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको गत असोज २४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले गतबर्षको मुनाफाबाट उक्त लाभांश..
हाम्रो विकास बैंकले १५ प्रतिशत, एक्सेल डेभलपमेन्टले २६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले २६ प्रतिशत बोनस शेयर प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश..
​काँक्रेविहार बैंकको हकप्रद सेयर कात्तिक १६ बाट
काठमाडौं । काँक्रेविहार विकास बैंक लिमिटेडले कात्तिक १६ गतेबाट हकप्रद सेयर वितरण गर्ने भएको छ । एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको बैंकले एक लाख ७२ हजार ५०० कित्ता हकप्रद सेयर जारी..
​भैं‌सेपाटी र कुलेश्वरमा सिटिजन्स बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ललितपुरको भैं‌सेपाटीमा र काठमाडौं‌को कुलेश्वरमा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले विशेष पुजापाठ गरिरे यी शाखा उदघाटन गरे..
​आज डेढ सय ट्यांकर तेल लिन भारतीय डिपोमा
काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी तेल दिने भनेपछि सोमबार डेढसय भन्दा बढी नेपाली ट्यांकरहरु भारत पुगेका छन् । शनिबार लोडिङमा भएको अवरोध हट्ने जानकारी..
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक र गौमुखी विकास बैंक एकआपसमा गाभिने
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक र गौमुखी विकास बैंक एकआपसमा गाभिने भएका छन् । मर्जरसम्बन्धी सम्झौतपत्रमा शाइन रेसुङ्गाको तर्फवाट अध्यक्ष थानेश्वर पौडेल र गौमुखीका तर्फवाट अध्यक्ष नारायण बैद्यले हस्ताक्षर..
​सिद्धार्थ बैंकले २० प्रतिसत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले लगानीकर्तालाई २० प्रतिसत बोनस सेयर दिने भएको छ । यो बैंकको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २० प्रतिसत बोनस र १.०५ प्रतिसत नगद लाभांस दिने प्रस्ताव..
​तिनाउ विकास बैंकले १८ प्रतिशत बोनश सेयर दिने
काठमाडौं । तिनाउ विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १८ प्रतिसत बोनस सेयर प्रस्ताव पारित गरेको छ । असोज १८ गते सोमबार सम्पन्न बैंकको नवौं वार्षिक साधारण सभाले यो प्रस्ताव पारित गरेको हो..
​बैंकमा पैसा सकियो, इन्धन र आन्दोलनको कारणले यातायात नचल्दा रकम अभाव
काठमाडौं । झन्डै दुई महिनादेखिको बन्द र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको कारण तराईका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रकम अभाव थालेको छ । त्यहाँका शाखा कार्यालयहरुले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा रकम अभाव..
​माछापुच्छ्रे बैंक १६ बर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले बैंकिङ्ग कारोवार शुरु गरेकोे १५ वर्ष पुरा गरी १६औं बर्षमा प्रबेश गरेको छ । पोखराबाट २०५७ सालमा बैंकिङ्ग कारोवार शुरु गरेको यस बैकले कुल शाखा संख्या..
​ज्योति बिकास बैंकले ९ प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौं । ज्योति बिकास बैंकले लगानीकर्तालाई नौ प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक संचालक समितिले आईतबार बसेको बैठकले नौ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि ४०..
मर्जरमा जाँदा वित्तिय क्षेत्रका साना संस्थाकोमात्रै सेयर कारोबार रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने साना संस्थाहरुको मात्रै सेयर कारोबार रोक्का गर्न सुझाब दिएको छ । ठूला र साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जर हुँदा साना संस्थाको सेयर..
​नबिल बैंकले ३० प्रतिसत बोनस सेयर र ६.८४ प्रतिसत नगद लाभांस दिने
काठमाडौं । नविल बैंकले लगानीकर्तालाई ३० प्रतिसत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले ३० प्रतिसत बोनस सेयर र ६.८४२ प्रसितत नगद लाभांस प्रस्ताव..
​माछापुच्छ्रे बैंकको ५:१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले लिमिटेडले ५:१ को अनुपातमा ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ अंकित ५५..
​माओवादी द्वन्द्वका कारण बन्द भएका बैंक शाखामध्ये १ सय २७ वटा शाखा पुनस्र्थापना
काठमाडौं । विगतमा माओवादी द्वन्द्वका कारण बन्द भएका बैंक शाखामध्ये १ सय २७ वटा शाखा पुनस्र्थापना भएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल..
रिलायबल रेमिट र निर्धन उत्थान बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । रिलायबल रेमिट र निर्धन उत्थान बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता भएको छ ्र रिलायबल रेमिट तथा रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकका सहायक महाप्रबन्धक दिपेन्द्र कडरीया र निर्धन उत्थान बैंकका नायब महाप्रबन्धक भोजराज..
Results 1896: You are at page 52 of 64